Fiaraha-monina miaina miaraka amin'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-03 mpandimby ny Magazine > Fiaraha-miasa amin'Andriamanitra
Im 2. Tamin’ny taonjato faha am.f.i., i Marcion dia nanolo-kevitra ny hanafoanana ny Testamenta Taloha (OT). Nanangona ny dikan-teny manokana momba ny Testamenta Vaovao (NT) izy noho ny fanampian’ny Filazantsaran’i Lioka sy ny taratasy nosoratan’i Paoly sasany, saingy nesoriny avokoa ny teny nalaina tao amin’ny OT satria nino izy fa tsy dia zava-dehibe loatra ilay Andriamanitry ny OT; Andriamanitry ny fokon’ny Israely ihany izy. Noho ny fielezan’io fomba fijery io dia noroahina tsy ho anisan’ny fiangonana i Marcion. Nanomboka nanangona ny kanônan’ny Soratra Masina avy eo ny fiangonana voalohany, izay ahitana ny filazantsara efatra sy ny taratasin’i Paoly rehetra. Ny fiangonana koa dia nitazona ny OT ho anisan’ny Baiboly, resy lahatra mafy fa ny votoatiny dia manampy antsika hahatakatra hoe iza i Jesosy ary inona no nataony ho famonjena antsika.
Ho an'ny maro, tena misafotofoto ny Testamenta Taloha - tena hafa be amin'ny NT. Ny tantara lava sy ny ady maro toa tsy misy ifandraisany amin'i Jesosy na ny fiainana kristiana ankehitriny. Amin'ny lafiny iray dia tokony hotandremana ny didy sy ny lalàna ao amin'ny OT ary eo amin'ny lafiny iray, dia toa toy izany no navahan'i Jesosy sy i Paoly azy tanteraka. Amin'ny lafiny iray kosa dia vitanay ny momba ny Jodaisma taloha ary amin'ny lafiny iray kosa dia ny amin'ny kristianisma.
Misy fiarahamonina mino izay mandray ny OT manan-danja kokoa noho ny fiaraha-monina hafa; dia mitandrina ny Sabata ho "andro fahafito" izy ireo, mitandrina ny sakafo Isiraeliana ary mankalaza ny fety isan-taona jiosy mihitsy aza. Ny Kristiana sasany dia tsy mamaky mihitsy ny Testamenta Taloha fa mifanitsy amin'ilay Marcion voalaza tany am-boalohany. Ny kristiana sasany dia anti-Semititika ihany koa. Mampalahelo fa rehefa nanapaka tany Sosialista ny National Socialists dia nanohana fiangonana izany toe-tsaina izany. Naseho koa izany tamin'ny fialana amin'ny AT sy ny jiosy.
Na izany aza, ny asa soratry ny Testamenta Taloha dia mirakitra fanambarana momba an’i Jesoa Kristy (Jao 5,39; Lioka 24,27) ary tsara ny mandre izay lazainy amintsika. Ahariharin’izy ireo koa ny zava-kendren’ny fisian’ny olombelona sy ny antony nahatongavan’i Jesosy hamonjy antsika. Ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao dia manambara fa Andriamanitra dia te hiaina ao amin’ny fiombonana amintsika. Nanomboka tao amin’ny Saha Edena ka hatrany Jerosalema Vaovao, ny tanjon’Andriamanitra dia ny hiainantsika mifanaraka amin’ny sitrapony.
Tao amin'ny saha Edena
Im 1. Ny Bokin’i Mosesy dia mamaritra ny fomba namoronan’Andriamanitra tsitoha izao rehetra izao tamin’ny alalan’ny fanomezana anarana fotsiny ny zavatra. Hoy Andriamanitra: “Ho tanteraka izany ary tanteraka tokoa izany”. Nomeny ny baiko ary nitranga izany. Mifanohitra amin'izany, ny tatitra 2. Toko avy amin'ny 1. Bokin’i Mosesy momba ny andriamanitra iray izay nandoto ny tanany. Niditra tao amin’ny zavaboariny Izy ka namorona olona tamin’ny tany, namboly hazo tao amin’ny saha ary nanao namana ho an-dralehilahy.
Tsy misy amin'ireo asa-soratra manome antsika sary feno momba ny zava-mitranga, fa ny lafin-javatra samihafa amin'Andriamanitra mitovy ihany no azo ekena. Na dia nanana fahefana hanao ny zavatra rehetra amin'ny alàlan'ny teniny aza izy dia nanapa-kevitra ny hiditra an-tsehatra manokana amin'ny famoronana olombelona izy. Izy no niresaka tamin'i Adama, nitondra ny biby teo aminy ary nandamina ny zava-drehetra mba ho fahafinaretana ho azy ny manana namana manodidina azy.
Na dia eo aza izany 3. Toko avy amin'ny 1. Ny Bokin’i Mosesy dia mitatitra fisehoan-javatra mampalahelo iray, izay mampiseho bebe kokoa ny fanirian’Andriamanitra ny olona. Taorian’ny nanotan’ny olona voalohany, dia nandeha namaky ny saha toy ny fanaony Andriamanitra (Genesisy 3,8). Naka endrika olombelona ilay Andriamanitra Mahery Indrindra ary re ny dian-tongony. Mety ho nipoitra tampoka izy raha tiany, saingy nisafidy ny hihaona amin'ilay lehilahy sy ilay vehivavy tamin'ny fomba olombelona izy. Mazava ho azy fa tsy nahagaga azy izany; Andriamanitra dia niara-nandeha tamin’izy ireo namakivaky ny saha ary niresaka taminy imbetsaka.
Tsy natahotra izy ireo hatreto, fa izao dia natahotra azy ireo ka niafina. Na dia nanalavitra ny fifandraisany tamin'Andriamanitra aza izy ireo, dia tsy Andriamanitra. Afaka nisotro ronono tezitra izy, fa tsy namoy ny zavaboariny. Tsy nisy tselatra na kotroka na feony hafa momba ny fahatezeran'Andriamanitra.
Nanontany an’ilay lehilahy sy vehivavy ny zava-nitranga Andriamanitra ary namaly izy ireo. Nohazavainy tamin’izy ireo avy eo izay ho vokatry ny zavatra ataony. Dia nanome akanjo izy (Genesisy 3,21) ary nanao izay hahazoana antoka fa tsy ho voatery hitoetra ao amin’ny toerana lavitra sy ny henatra mandrakizay izy ireo (Genesisy 3,22-23). Ianarantsika avy ao amin’ny bokin’i Mosesy voalohany ny resaka nifanaovan’Andriamanitra tamin’i Kaina, Noa, Abrama, Hagara, Abimeleka sy ny hafa. Zava-dehibe indrindra ho antsika ny fampanantenana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrahama manao hoe: “Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao hatramin’ny taranaka fara mandimby, fa ho fanekena mandrakizay izany” (Genesisy 1.7,1-8e). Nampanantena Andriamanitra fa hanana fifandraisana maharitra amin’ny vahoakany izy.
Maro no mahalala ny tena zava-dehibe amin’ny tantaran’ny fivoahan’ny vahoakan’Israely avy tany Egypta: Andriamanitra niantso an’i Mosesy, nitondra loza tany Egypta, nitarika ny Isiraely namakivaky ny Ranomasina Mena ka hatrany an-tendrombohitra Sinay ary nanome azy ireo ny didy folo. Amin’ny fanaovana izany, dia matetika no hadinontsika ny antony nanaovan’Andriamanitra izany rehetra izany. Hoy Andriamanitra tamin’i Mosesy: “Handray anareo ho oloko Aho, ary ho Andriamanitrareo.” ( Eks 6,7). Te hanorina fifandraisana manokana Andriamanitra. Nofaranana tamin’io fotoana io ny fifanarahana manokana toy ny fanambadiana tamin’ny teny hoe: “Ho vadiko ianao ary izaho ho vadinao”. Nofehezina tamin’ny teny hoe: “Ho zanako ianao, ary izaho ho rainao”. Rehefa niresaka tamin’i Farao i Mosesy, dia nanonona an’Andriamanitra hoe: “Israely no lahimatoako; ary mandidy anao aho handefa ny zanako hanompo Ahy.” (Eksodosy 4,22-23). Ny zanak'Israely dia zanany - ny fianakaviany - naloaky ny vavany.
Nanolotra fanekempihavanana ho an’ny olony Andriamanitra izay mamela ny fidirana mivantana amin’izy ireo (2. Mosesy 19,5-6) - fa hoy ny olona tamin'i Mosesy: «Miresaka aminay ianao, fa te hihaino izahay; fa aza avela hiteny amintsika Andriamanitra, fandrao ho faty isika » (Eksodosy 2:20,19). Toa an’i Adama sy Eva, dia resin’ny tahotra izy. Nihanika ny tendrombohitra i Mosesy mba hahazoana fampianarana fanampiny avy amin’Andriamanitra4,19). Avy eo dia misy toko isan-karazany momba ny tabernakely sy ny fanorenana azy ary ny ôrdônansin'ny fanompoam-pivavahana. Ambonin’ireo tsipiriany rehetra ireo dia tsy tokony hohadinointsika ny zava-kendren’izany rehetra izany: “Hanao fitoerana masina ho Ahy izy, dia honina eo aminy Aho.” ( Eksodosy 2 Kor.5,8).
Manomboka amin’ny saha Edena, amin’ny alalan’ny teny fikasana tamin’i Abrahama, tamin’ny alalan’ny fifidianana vahoaka avy amin’ny fanandevozana ary hatramin’ny mandrakizay, Andriamanitra dia maniry ny hiaina amin’ny fiombonana amin’ny olony. Ny tabernakely no toerana nipetrahan’Andriamanitra niaraka tamin’ny olony sy toerana nanatonan’izy ireo Azy. Hoy Andriamanitra tamin’i Mosesy: “Ary honina eo amin’ny Zanak’Isiraely Aho, ka ho Andriamaniny Aho, mba ho fantany fa Izaho no Jehovah Andriamaniny, Izay nitondra azy nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta, mba honina eo aminy.” ( Eksodosy 2.9,45- iray).
Rehefa nafindran’Andriamanitra tamin’i Josoa ny fitarihana, dia nandidy an’i Mosesy izay holazainy taminy Izy: “Jehovah Andriamanitrao no hiaraka aminao ka tsy hanaisotra ny tanany ary tsy hahafoy anao.”5. Mosesy 31,6-8e). Mihatra amintsika ankehitriny koa izany fampanantenana izany (Hebreo 13,5). Izany no namoronan’Andriamanitra ny olombelona hatramin’ny voalohany sy nanirahany an’i Jesosy ho famonjena antsika: olony isika. Te hiara-hiaina amintsika Izy.